HAMRAKHABAR | » कसैको मृ’त्युमा तपाईं हामीले लेख्ने गरेको ‘RIP’ को खास अर्थ के ? थाहा पाउनुहाेस…. कसैको मृ’त्युमा तपाईं हामीले लेख्ने गरेको ‘RIP’ को खास अर्थ के ? थाहा पाउनुहाेस…. – HAMRAKHABAR
कसैको मृ’त्युमा तपाईं हामीले लेख्ने गरेको ‘RIP’ को खास अर्थ के ? थाहा पाउनुहाेस….
कसैको मृ’त्युको खबर सुन्ने वा देख्ने बित्तिकै सामाजिक संजालमा जसले पनि ‘रिप’ लेखेका हुन्छन् ।सामाजिक संजालमा धेरै देखिने शब्द हो ‘रिप’ ।खासमा कसैको मृ’त्युमा श्र’द्धाञ्जली या स’मबेदनामा रिप लेख्ने गरिन्छ । यो एउटा फेसन नै बनिसकेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । तर रिप भनेको के हो, यसको खास अर्थ के हुन्छ ? यस बारेमा सायद थोरैलाई मात्र थाहा होला ।
कुनै इसाई तथा इस्लाम धर्मलम्बीहरुमा मित्रहरू छन् भने उनीहरुको लगि RIP लेख्न सकिन्छ । हामी अल्छि भएर धेरै छोटो लेख्न खोज्दा जानी या नजानी आफ्नो मुल्य मान्यता सस्कृतिलाई असर पुर्याउन पुगेको छ । त्यसकारण कृष्चियन र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु बाहेकले प्रयोग गर्नु उचित हुदैन ।समाचार बाटिका बाट